Nanandrana Nanafaka An’i Jesosy i Pilato | Fiainan’i Jesosy
“Indro ny Lehilahy!”
MATIO 27:15-17, 20-30 MARKA 15:6-19 LIOKA 23:18-25 JAONA 18:39–19:5
NANANDRANA NANAFAKA AN’I JESOSY I PILATO
I BARABASY NO NASAIN’NY JIOSY NAFAHANA
NATAO HO FIHOMEHEZANA SY NAMPIJALINA I JESOSY
Hoy i Pilato tamin’ireo nangataka ny hamonoana an’i Jesosy: “Tsy hitako izay helony ny amin’izay iampanganareo azy. Na i Heroda koa aza tsy nahita izay helony.” (Lioka 23:14, 15) Nitady hevitra hafa hanavotana an’i Jesosy i Pilato ka niteny hoe: “Araka ny fombanareo koa ange dia tokony hanafaka olona iray ho anareo aho rehefa Paska e! Koa tianareo hafahako ho anareo ve ilay mpanjakan’ny Jiosy?”—Jaona 18:39.
Fantatr’i Pilato fa nisy jiolahy mpandroba sy mpikomy ary mpamono olona atao hoe Barabasy tao am-ponja. Hoy àry izy: “Iza no tianareo hafahako ho anareo: I Barabasy sa i Jesosy ilay antsoina hoe Kristy?” I Barabasy no nofidin’ny vahoaka fa tsy i Jesosy, satria nampirisihin’ny lehiben’ny mpisorona hanao izany izy ireo. Hoy indray i Pilato: “Iza amin’izy roa lahy no tianareo hafahako ho anareo?” Niantsoantso ny vahoaka hoe: “Barabasy.”—Matio 27:17, 21.
Very hevitra i Pilato ka nanontany hoe: “Inona àry no hataoko amin’i Jesosy, ilay antsoina hoe Kristy?” Niara-niredona ny vahoaka hoe: “Aoka hofantsihana amin’ny hazo fijaliana izy!” (Matio 27:22) Mahamenatra ny nataon’izy ireo, satria olona tsy manan-tsiny no tiany hovonoina ho faty. Niangavy i Pilato hoe: “Fa nahoana? Inona no ratsy nataony? Tsy hitako mihitsy izay tokony hamonoana azy ho faty. Koa hofaiziko izy dia hafahako.”—Lioka 23:22.
Nitady fomba hanafahana an’i Jesosy foana i Pilato. Tezitra be anefa ny vahoaka ka niara-nikiakiaka hoe: “Aoka hofantsihana amin’ny hazo fijaliana izy!” (Matio 27:23) Lasa te hamono olona izy ireo satria nataon’ny mpitondra fivavahana izay hahatonga azy ireo hafana fo tafahoatra. Tsy mpanao heloka bevava na mpamono olona anefa no tiany hovonoina fa lehilahy tsy manan-tsiny, izay noarahabaina toy ny Mpanjaka tao Jerosalema dimy andro talohan’izay. Nangina sy nimpirimpirina ny mpianatr’i Jesosy raha teo.
Hitan’i Pilato fa tsy nisy vokany ny ezaka nataony. Vao mainka nisavorovoro ny vahoaka, ka naka rano izy ary nanasa tanana teo anatrehan’izy ireo sady niteny hoe: “Tsy tompon’andraikitra amin’ny fahafatesan’io lehilahy io aho, fa raharahanareo izany.” Tsy nihontsina ilay vahoaka fa niteny hoe: “Izahay sy ny zanakay no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.”—Matio 27:24, 25.
Naleon’i Pilato Governora nampifaly ny vahoaka toy izay hanao ny rariny. Nafahany àry i Barabasy, araka ny notadiavin’izy ireo. Nasainy nesorina kosa ny akanjon’i Jesosy ary nokaravasina izy.
Nentin’ny miaramila tao an-dapan’ny governora i Jesosy. Niangona teo aminy izy ireo ary vao mainka nanao azy ho tsinontsinona. Nandrandrana fehiloha tsilo izy ireo ary notereny hipetraka teo amin’ny lohany izany. Nasiany bararata koa teny an-tanan’i Jesosy havanana ary nampitafiany lamba mena midorehitra toy ny an’ny mpanjaka izy. Naneso azy izy ireo hoe: “Arahaba, ry Mpanjakan’ny Jiosy!” (Matio 27:28, 29) Nororany izy ary nasiany tehamaina imbetsaka. Nalain’izy ireo ilay bararata teny an-tanany ary nikapohany ny lohany. Vao mainka nilentika tamin’ny hodi-dohany ireo tsilo tamin’ilay fehiloha, izay nataon’izy ireo toy ny satroboninahitra hanambaniana azy.
Tena nampiaiky an’i Pilato ny nahita fa tony sy natanja-tsaina foana i Jesosy. Tsy te ho tompon’andraikitra tamin’ny fanamelohana azy àry izy, ka niteny hoe: “Io àry izy fa entiko mivoaka eto aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay fahadisoany.” Nety ho nieritreritra ve i Pilato hoe hiova hevitra ny vahoaka rehefa mahita an’i Jesosy efa mangana sy mivoa-dra? Nitsangana teo anoloan’ilay vahoaka nanana fo vato i Jesosy. Hoy i Pilato: “Indro ny lehilahy!”—Jaona 19:4, 5.
Tena nampiaiky an’i Pilato ny nahita an’i Jesosy tony foana sy nangina, na dia efa maty vono sy feno ratra aza. Toa hita tamin’ny teniny mantsy fa nanaja sy nangoraka an’i Jesosy izy.
KAPOKA AMIN’NY KARAVASY
Miresaka momba an’io fanaon’ny Romanina io ny Dr. William Edwards ao amin’ny Gazetin’ny Fikambanana Amerikanina Momba ny Fitsaboana. Hoy izy:
‘Karavasy fohifohy (flagrum na flagellum) no nampiasaina matetika. Nisy tady hoditra tsotra na tady hoditra narandrana tamin’ilay izy, ary maromaro izy ireo sady tsy nitovy halava. Nisy vy kely boribory na tapa-taolan’ondry maranitra nafatotra tamin’ireo hoditra ary natao mifanelanelana. Namerimberina nikapoka mafy ny lamosin’ilay nokapohina ny miaramila romanina, ka nandratra be ny hoditr’ilay olona ireo vy boribory. Nandidididy ny hoditr’ilay olona sy ny nofo tao ambaniny koa ireo tady hoditra sy taolan’ondry. Naratra hatramin’ny hozatra tany akaikin’ny taolana rehefa nitohy ny fikapohana, ka hita nihetsiketsika ny nofo mitsiratsiraka sy mivoa-dra.’
Inona no nataon’i Pilato mba hanafahana an’i Jesosy, ka tsy hahatonga azy ho tompon’andraikitra tamin’ny famonoana azy?
Inona no nitranga tamin’ny olona nokaravasina?
Inona no mbola natao tamin’i Jesosy rehefa avy nokaravasina izy?
Hizara Hizara “Indro ny Lehilahy!”